पशुपंक्षीलाई लाग्ने ६० प्रतिशत रोग मान्छेलाई सर्छ, कसरी चिन्ने रोगी खसीबोका ? (भिडियो)
आश्विन २६, २०७८ ०७:४६ मा प्रकाशित
दशैंमा पशु पक्षीको मासु अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । दशैंमा उपभोगका लागि देशका मुख्य शहर लगायत काठमाडौं उपत्यकामा खसी, बोका, राँगा भैसी, भेडा, च्याङ्ग्रा, कुखुरा लगायत अध्याधिक भित्रिरहेका छन् ।
दशैंको समयमा अस्वस्थ पशुपक्षी नभित्रिउन र उपभोक्ताले स्वस्थ्य मासुको उपभोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले पशुसेवा विभागको टोली अनुगमनमा खटिएको छ।
असोज २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म काठमाडौं छिर्ने नाका तथा विक्रि केन्द्रमा पशुपंक्षीको परीक्षण गर्न पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकहरुलाई खटाइएको छ ।
अनुगमनकै क्रममा आइतबार बिहान पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकको टोली लोकन्ली खसी बजार पुगेको थियो । डा. किरण पाण्डेको नेतृत्वमा अनुगमनमा रहेको टोलीसँग हामीले पशु स्वास्थ्य र स्वच्छ मासु उपभोगका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
कसरी चिन्ने रोगी खसी बोका ?
मानिसलाई जस्तै खसी बोका राँगा, भैसी, बंगुर सबैलाई रोग लाग्छ । अनुगमनका क्रममा हामीले प्रत्येलाई परीक्षण गर्न सम्भव छैन । अनि हर्ड हेल्थ अर्थात बथान स्वास्थ्यका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौं ।
बथानमा रहेका खसी बोकालाई सरसरर्ती हेर्ने । यसरी हेर्ने क्रममा कुनैमा आँखामा चिप्रा लागेका खोक्ने, सिगान बनाएका, पातलो दिसा गरेका, आँखा भरिलो भएका जस्ता लक्षणका देखिएको पाइएमा तिनलाई छुट्टै राखी थप परीक्षण हुन्छ ।
त्यसलाई छुट्टै आइसोलेट गरेर राख्ने गरिन्छ । परीक्षण गरी रोग पत्ता लगाइन्छ । माथि उल्लेखित लक्षणका अलवा ज्वरो परीक्षण गर्ने, श्वास–प्रश्वासको अवस्था परीक्षण गरीरोगबारे परीक्षण गरिन्छ ।
त्यहाँको परीक्षणले पनि नपुगेका ल्याब परीक्षणका लागि नमुना लिइन्छ । शंका लागे अनुसार स्वाब, दिसा, रगत लगायतका नमुना लिएर केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गरी रोग पहिचान गर्ने काम गरिन्छ ।
बाख्रामा धेरै देखिने पिपिआर रोग हुन्छ । यसकाको परीक्षण गर्न नाकबाट स्वाब लिइन्छ । पीपीआर भनेको मान्छेमा लाग्ने विफर जस्तै हो । यो बाख्राबाट बाख्रामा मात्रै सर्छ मान्छेमा भने सर्दैन ।
पेटको रोग परीक्षण गर्न दिसाको नमुना लिइन्छ । मिर्गौला, कलेजोमा इन्फेक्स छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने रगतको नमुना पनि लिइन्छ ।
यसरी परीक्षण गर्दा रोगको पुष्टि भएकालाई छुट्टै राखी उपचार गरिन्छ । केहीदिनको उपचार गरी स्वस्थ बनाएर मात्रै विक्रीका लागि अनुमति दिइन्छ ।
स्वस्थ मासु उत्पादनमा गर्न पालकबाटै सुरुवात
स्वस्थ्य मासु उत्पादनका लागि सुरुमा उत्पादक किसानलाई नै पशु पंक्षीको बारे ज्ञान दिनु आवश्यक छ । जबसम्स पशुपंक्षीको रोग निधानका बारेमा किसानलाई ज्ञान हुँदैन,पशुपक्षींको स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी हुँदैन त्यो बेलासम्म स्वस्थ्य पशु उत्पादन हुँदैनन ।
तबसम्म बजारमा स्वस्थ मासु आउन सक्दैन । यस कारण सुरुमा त किसानलाई नै तालिम दिइने व्यवस्था छ । किसानहरुलाई औषधि उपलब्ध गराइन्छ ।
त्यसपछि संकलकन गर्दा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा त विक्रीका बजारमा लैजानका दागि खरिद गर्दा स्वस्थ्य पशुपक्षीं खरिद गर्नुपर्छ ।
संकलन गरेर राख्ने केन्द्रमा अवस्थ नहुन भनेर पानी, खाना र बस्ने ठाउँको राम्रो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ढुवानीका क्रममा पशु अस्वस्थ नहोस् भनेर तनाव नहोस् भनेर । पशु ढुवानी मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसका आधारमा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जनावरलाई गाडीमा कसरी राख्ने ? कति ठाउँमा कति जनावर राख्ने भन्ने मापदण्ड छ ।
टाढाको बाटोमा लगातार हिँडाइ रहँदा जनावरलाई अनावश्यक तनाव नहोस् भनेर होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जस्तो चितवनमा एउटा होल्डिङ सेन्टर राखिएको छ ।
बजारमा ल्याएपछि त्यहाँ परीक्षण गरेर मात्रा विक्रीका लागि योग्य छ छैन परीक्षण गरिन्छ । स्वस्थ भएकाको सिङमा हरियो चिन्ह लगाउने गरिन्छ ।
शंकास्पद भएका रातो चिन्ह लगाउनले गरिएको छ ।
मानिसमा लाग्ने ६० प्रतिशत रोग पशुपंक्षीबाट सर्ने गर्छन् । मासिनबाट पशुपक्षींमा सर्ने र पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने यस किसिमका रोगलाई जोनोटिक रोग भनिन्छ । पशु उत्पादनहरु मासु, अण्डा, दूध खाँदा यस्तो रोगहरु आउन सक्छन् । यसमा हामी हुनुपर्छ । पशुपक्षींका उत्पादन प्रयोग गर्दा उच्च तापक्रममा पकाएर खाने गर्नुपर्छ ।
दूधहरुको लागि ७२ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि र मासुलाई १०० डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा पकाएर खायो भने हामी रोगबाट बच्न सक्छौँ ।
मासु कस्तो ठाउँमा काटिएको छ । कस्तो ठाउँमा स्टोर गरिएको छ । त्यो ध्यान दिएर खरिद गर्नुपर्छ । एउटा आधार पशु चिकित्सकरुले हरियो चिन्ह लगाएकालाई मान्न सकिन्छ । अर्काे भनेको आफैँले हेरेर पनि चिन्न सकिन्छ । नाकबाट सिगान बगाएको छ छैन, रुधाखोकी लागेको छ कि छैन । आँखामा चिप्रा लागेको झोक्राएरको जस्ता समस्या देखिएका पशु मासुका लागि खरिद गर्नहुँदैन ।
अस्वस्थ मासु खाँदा रोगलाग्छ कि भनेर डराइ हाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । मज्जाले पकाएर खाँदा कुनै पनि रोग सर्दैन ।